Dhaabbileen siyaasaa dambii naamusa filannootiif bitamuu akka qaban ibsame
Paartileen siyaasaa hundinuu dam­bii fi qajeelfama naamuusa filannootiif amanamoo ta’uun mirga abbaa aangum­maa ummataa kabajuun akka irra jiraatu ibsame.
Dambiifi qajeelfama namuusa fi­lannoo irratti hubannoo gaggeessitootaa cimsuuf leenjiin guyyoota lamaaf gag­geessitoota godinaalee fi magaaloota Oromiyaaf Adaamaatti kennameera.Leenjiin kun kan barbaachiseef, gag­geessitoonnii fi miseensonni dhaaba keenya dambii fi qajeelfama filannoo kana irratti hubannoo qaban caalmaatti gabbifachuun, filannoo mana maree aanaa, magaalaa fi gandaa bara kana gaggeeffamu, demokraatawaa, haqa-qabeessa, nagaafi ummata biratti ama­namaa akka ta’u gochuun, ulfinaafi aantummaan dhaabni keenya ummata isaaf qabu caalmaatti akka mirkanaa’u gochuuf kan qophaaq’e ta’uu I/G/B/Haqaa Oromiyaa Ob. Fiqaaduu Sabboo­qaa ibsaniiru.
Seenaa biyya keenyaa keessatti um­manni abbaa aangoo ta’uun nama bakka isa bu’u filachuu dana’uun isaa boqon­naa haaraa qabsoo dhaaba keenyaatiin argame waan ta’eef, mirga demokraasii ummanni gonfate kana itti fufsiisuuf paartileen siyaasaa aangoo ummataatiif dorgoman hundi dambiifi qajeelfama filannoo kanaaf bitamuu akka qabanisOb. Fiqaaduun hubachiisaniiru.
Dambii fi qajeelfamni namuusa filannoo kun adda durummaa gag­geessitootaafi miseensoota,dhaaba keenyaatiin hojiirra yoo oole, dhaabni keenya heeraa fi seera eegee deemuun aantummaa fi quuqama ummata isaaf qabu dhugoomsuu isaatiin ala, dharraa paartiileen siyaasaa tokko tokkoo karaa qaxxaamuraatiin aangoo qabachuu ir­ratti qaban kan cufu ta’uunis ibsameera.Kana waan ta’eef, miseensonni dhaaba keenyaafi gaggeessitoonni dambicha ofii kabajuun, paartileen biroos akka kabajaniif qabsoon isaanii cimuu qaba jedhan Ob.Fiqaaduun
Dambiifi qajeelfama namuusa filan­noo kana irratti ibsi hogganaa B/H/Oromiyaa kan ta’an Ob. Fiqaaduu Sab­booqaatiin erga itti kennameen booda, hirmaattoonni yaadoota gara garaa kaa­suun irratti mar’ataniiru.
Marii kanaanis , dambiin namuusa filannoo kun, mirgaafi dirqama ibsuun, hojimaata itti gaafatamummaa diriirsuu isaatiin ala, paartiileen siyaasaa miira wal-danda’uufi wal-kabajuutiin mirgoo­ta demokraasii ummanni gonfate cimee akka itti fufu taasisa jedhaniiru.
Kanaafis, adda durummaa dhaaba keenyaa Dh.D.U.O. mirkaneessuuf, bu’aa qabeessummaa kaayyoofi sagan­taa dhaaba keenyaa ummatatti ibsuu qo­faan sagalee caalmaa dhaaba keenyaati­in filannicha mo’achuuf hojjechuun, ejjennoo hirmaattoota kanaati.
Dhimmi qajeelfama naamuusa fi­lannoo kanarratti hubannoo uumuu hanga sadarkaa gandaafi gandaa gadiitti itti fufsiisuun murteessaa waan ta’eef qaamni filannoo kana keessatti hirmaatu hundi kallattii kana hordofuu qaba jed­hameera